बचाउन सक्ने समयमा नागरिकमाथी चरम बेवास्ता, मृत्युपछि राहतको घोषणा ! – Mission Khabar
बचाउन सक्ने समयमा नागरिकमाथी चरम बेवास्ता, मृत्युपछि राहतको घोषणा !
मिसन खबर १२ असार २०७७, शुक्रबार २३:२६
काठमाडौं । सास रहुञ्जेलसम्म नागरिकमाथी वेवास्ता गर्ने सरकारी निकाय मरेपछि भने राहात र सहानुभूति देखाउने गरिरहन्छन् । नागरिक छट्पटाई रहँदा रमिते बनेर सास बचाउन चासो नदेखाउने निकाय ज्यान गइसकेपछि भने राहात र सहानुभूति प्रकटका प्रतिस्पधी बन्ने गरेका घटना नेपालमा थुप्रै छन् ।
यस्तै व्यवहारको पछिल्लो उदाहरण हो, धनुषाका राजु सदाको परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले ५ लाख दिने भन्दै गरेको घोषणा । निशुल्क पाइने जीवनजल समेत नपाएर आइसोलेसनमा झाडापखालाबाट ज्यान गुमाएका धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका राजु सदाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो । आइसोलेसनमा रहँदा उपचार नै नपाएर छट्पटाई रहेका राजु सदाको मृत्यु प्रकरणबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति पनि गठन भयो । जेठ ३ गते भारतको अहमदावादबाट आएका राजुलाई गाउँकै क्वारेन्टिनमै राखिएको थियो । तर न राम्रो हेरचाह भयो न त पखालाबाट छट्पटाउँदा उपचार नै । १७ दिनसम्म क्वारेन्टिनमै बसेपछि उनलाई झाडापखाला लाग्दा टिपरमा बसाएर प्रादेशिक अस्पतालको गेटसम्म ल्याइयो । त्यही उनको स्वाब संकलन गरिएपनि समयमै रिपोर्ट नआएका कारण उनले राम्रो उपचार पाएनन् ।
झाडापखालाबाट ग्रस्त भएका राजुको जीवनजल समेत खान नपाएर ज्यान गयो । मृत्युपछि रिपोर्ट आयो कोरोना नेगेटिभ । राजुको छटपटाहट र उपचार नपाएको दृश्य देख्दा सबैलाई लाग्छ मानवता हराउँदै गएको सरकारी निकाय जनताको स्वाथ्यप्रति बेमतलबी छ भन्ने । धनगढीमा समेत एक जनाको समयमै कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट नआउँदा ज्यान गएको थियो । मिर्गौलामा जटिल समस्या देखिएकाले तत्काल डायलाइसिस गर्नुपर्ने भएपनि बैतडीको मेलौलीका ४७ वर्षीय रामी धानुकको रिपोर्ट कुर्दा कुर्दै ज्यान गयो । कतै बस्नै गाह्रो, कतै खान, सौचालयकै समस्या । यसरी क्वारेन्टाइन कोरोनाको जोखिम बढाउने कारक बन्दैगर्दा समेत व्यवस्थित गर्नेमा सरकारी बेवास्था । उपचार समेत प्रभावकारी नहुदा जनताको जिउज्यान जोखिममा पर्न थालेको बारे सरकार कहिलेबाट गम्भिर बन्ने ?
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशबाहिरबाट आउनेहरुका लागि क्वारेन्टाइन बनाएको छ । देशभर सञ्चालित क्वारेन्टाइन हुन् वा आइसुलेसनमा बिरामी उपचार नपाएरै अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोनाकै कारण मृत्यु भएका २७ जनामध्ये १९ जनाको त मृत्युपछि मात्रै कोरोना पोजेटिभको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । बुटवलस्थित आइसोलेसन, सीमा नाका, बाटोमा मात्रै होइन बाँकेको क्वारेन्टाइन, अर्घाखाँचीमा आत्महत्या समेत गरेको घटनाले क्वारेन्टाइन र आइसुलेसन कति सुरक्षित छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । अझ धनगढीको क्वारेन्टाइनमा त सामुहिक बलात्कारको घटनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जनताको उपचार र सुरक्षा कत्ति पनि गम्भिर छैनन भन्ने देखाएको छ ।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करिव १० अर्व खर्च भएको सार्वजनिक गर्दा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन लथालिंग र भद्रगोल अवस्था । यो अवस्थाले खर्चमै प्रश्न उठिरहेको छ । सरकार भनिरहेको छ भौतिक दुरी कायम गरौं, खानपिनमा ध्यान दिऔं सावुन पानीले हात धोऔं । तर, क्वारेन्टाइन र आइसुलेसनको अवस्थाले सरकारको भनाईलाई आफै गिज्याइरहेको छ । उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने अवस्थाको दोषी को हो सरकार ? अनि कहिलेसम्म नागरिककको जीवनमाथी बेवास्ता गरिरहने ?